Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal aad u xoogan oo saakay ka dhacay Deegaanka Wacays Qodle ee Gobolka Jarar
Isniin (ONA) War goordhawayd nagasoo gaadhay xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in askarta gumaysiga Ethiopia ka bilaabeen olole cusub gobolka Jarar deegaano kamid ah sida caasimada goblkaasi ee Dhagaxbuur oo maalmihii ugu dambeeyey ay dad farabadan ku xidhxidheen magaaladaasi.
Saakay (22 Okt 2012) ayaa ciidan aad ufaraban oo isgu jira Milatariga gumaysiga Ethiopia iyo dabaqoodhiga hawaarinta ee gadhwadeenka u ah askartagumaysiga ay weerar xoogan ku sooqaadeen Deegaanka Wacays-qodle ee Gobolka Jarar halkaasi oo sida ay saraakiisha xarunta dhexe nooxaqiijiyeen ay rabeen Askarta wayaanuhu inay soo xidhxidhaan dadka deegaanka wacays-qodle.
Askarta gumaysiga Ethiopia oo siiduulaan ah aroortii hore ee saakay ayaa waxaa weerar dhabagal ah oo aysan filayn ku qaaday Cutub aad uqalabaysan oo katirsan Qaybta Duufaan ee CWXO waxaana lasheegayaa in halkaasi uu kadhacay dagaal aad uculus oo khasaare lixaadle loogu gaystay askarta wayaanaha.
Bakhtiga Askarta gumaysiga ethiopia ayaa lasheegay inay daadsanaayeen duleedka magaalada Wacays-qodle.
Sidookale gurmad usoo gurmaday Askartii lagu laayey dagaalkii wacaysqodle ayaa waxaa jidka ugalay cutub kuqalabaysan hub ay kamid ahaayeen qoryaha sabanka ama Baasuukaha ee lagu burburiyo gaadiidka waxaana lasheegayaa in halkaasi lagu naafeeyey gaadiidkii gurmadka ahaa taasina ay sababtay inay dib firxadkoodii ugu laabtaan magaalada Dhagaxbuur oo ahayd halkii ay kolkii hore kasoo gurmadeen
Faahfaahinta dagaalkaan dib ayaan kasoo sheegi doonaa.